Ny milina Crusher Tollemache 42F miorina amin'ny motosala miorina dia natao manokana amin'ny fikarakarana ny fako sy ny fako indostrialy maivana.
Ny trano crusher dia misy fizarana roa, faritra conical ambony ary faritra ambany cylindrical. Entina mitaingina rotorina ambony sy ambany izy ireo.
Ny ampahany amin'ny endrika cone-ambony dia misy tetezana iray izay ampiakaran'ny tohatra ambony. Ity ampahany ity dia mandrafitra ny faritra mialoha, izay ariana tsy azo esorina ny fandroahana. Amin'izany fomba izany, arovana ny milina. Ny ampahany amin'ny cylindrical ambany dia mitondra ny singa fitondra ambany sy mihetsika ho toy ny efitrano fikosoham-bary, izay ahitana ny ampahany lehibe amin'ny fikosoham-bary. Ny motera crusher dia mipetaka amina frame, izay mipetaka ao am-baravaran'ny crusher.
Ireo trano fanatobiana entana dia hita eo ivelan'ny trano crusher ary feno labyrinth sy tombo-kase fiatoana, izay manakana ny feta tsy hiditra. Ny trano fonenana misy haingony dia misy rantsana mitovitovy ary misy tsipika boribory boribory tokana. Ny fantsom-bary ambany dia menaka solika ary mampiasa ny herin'ny paompy fantsom-bika amin'ny fivontosana menaka ao an-tokotanin-tsolika ary eo anelanelan'io sy ny tanky solika, izay eo ivelan'ny trano manorotoro ary mora azo idirana.
Ny rotor dia misy tohatra mitsangana misy kapila 14 boribory, mizara ho fizarana 3. Ny fizarana tsirairay dia misy fehezana vita amin'ny antsimo 6, izay ahafahana mifampitifitra malalaka ny hamon-tanana. Nofatorana an'ireo mihazona afakomaly ny basy, izay manamora ny fanoloana hamonoana.
Ny crusher dia miasa toy izao:
Ny fako tsy namboarina dia zakaina amin'ny tampon'ny faritra conical ny milina, izay ny singa mandrafitra ny fako dia avy hatrany voapoka amin'ny tantanana ary potika anaty sombiny kely kokoa. Ireo mivezivezy io dia midina hatrany amin'ny cone. Rehefa tapaka amin'ny fantsom-bidy kely ny fako, dia mianjera amin'ny tenda misy ilay fikosoham-bary no mahatonga izany. Eto dia arotsaka tsara ny fako alohan'ny famoahana azy amin'ny farany ambany.
Ny tantan-tsolika amin'ny faritra ambany amin'ny fanapariahana dia napetaka amin'ny faribolana toy ny alikadia. Io fandaharana io dia manamora ny famotsorana ny fako atomika ary, ankoatr'izay, dia manome rivotra mikoriana amin'ny alàlan'ny fikosoham-bary, izay manakana ny vovoka tsy hiparitaka amin'ny fidirana anatiny sy anaty trano fivoahana.
Ny crusher dia natao handrindrana sy hanipazana ireo fako am-ponja, fananganana fako ara-materialy, bisikileta, scooter amin'ny motera, sns.
Ny fahombiazan'ny fikolokoloana lozisialy dia miankina amin'ny fahaiza-manaon'ny machinista sy ny fombany. Ny zavatra sasany dia tokony tsy homena ao anaty milina. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia mihatra amin'ny zavatra mety hiteraka fanakanana ao amin'ny milina izy ireo fa tsy misy fahasimbana lehibe. Araka izany, mihatra amin'ny fahaverezan'ny fotoana izany hanadiovana ny fanakanana. Amin'izao toe-javatra izao, ny halavan'ny zavatra dia zava-dehibe kokoa noho ny fahatsapan-toetrany.
Ity lisitra manaraka ity dia tsy feno ary ho raisina ho ohatra ho an'ny zavatra tsy tokony ho rava.
Fitaovana, kasety, sns izay misy loharano coil.
Kodiarana avy amin'ny fiara sy fiara lehibe kokoa.
Zavatra izay lava noho ny 120 sm (4 tongotra), toy ny tariby vy, vazo vita amin'ny hazo, tady hemp izay matevina noho ny 10 mm, plastika misy habe lehibe, plastika plastika, faritra misy vy ary maro hafa.
Ny entana mipoaka, ohatra, ny tavoahangy misy entona, lasantsy, lasantsy, sns, baomba, bala, sns.
Ny ampahany amin'ny fiara, toy ny motera iray manontolo, famaky aoriana ary maro hafa.
Tsara homarihina fa amin'ny maha-fitsipika dia tsy misy olana amin'ny famahanana karpetra sy ny toy izany, raha toa ka omena vahana malalaka izy ireo, izany hoe tsy atambatra.
Ny fisokafan'ny fivoahana anatiny dia 150 cm x 90 cm. Ny zava-maniry dia mikapa ny rehetra izay afaka mandalo ity fisokafana ity. Na izany aza, ireo zavatra mihoa-pampana na ireo voalaza fa tsy mety dia mety manakana ny fanakatonana ny famahanana ny sakafo ary ny machinista dia tokony hanala azy ireo alohan'ny sakafo.
Ny fatiantoka dia 15-20 taonina fako isaky ny adiny iray
Crusher misy mijanona rotor sy kapoka tsy manara-penitra.
Lanja: 12 taonina eo ho eo
Motera: 132 kW
Ny crusher dia natao amin'ny fako sy ny fandravana trano an-trano sns.
Capacity eo amin'ny 18-20 taonina / ora.
Azo atao ny manome fitaovana, ohatra fihinana apron.